Ku xannibnaa galabnimadii Sabtida ee quruxda badnayd waxay xanuun iyo dhimasho u keentay rakaabka Amtrak ee Montana
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Tareenka » Ku xannibnaa galabnimadii Sabtida ee quruxda badnayd waxay xanuun iyo dhimasho u keentay rakaabka Amtrak ee Montana
Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Maanta ugu yaraan 3 qof ayaa dhimatay, in ka badan 50 ayaa ku dhaawacmay tareenka Amtrak ee Montana ka dib markii afar baabuur ay dul mareen.
Tareenka Amtrak ayaa ku sii jeeday Miami derails meel u dhow Mobile, Alabama, wuxuuna dilay 47 qof 22 -kii Sebtembar, 1993. Shilkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Amtrak, waxaa sabab u ahaa hawlwadeen dayactir doon ah iyo xaalado ceeryaamo ah.
Dhowr qof ayaa dhintay, 50+ ayaa ku dhaawacmay maanta tareen #Amtrak oo ku yaal #Montana
Tareenka ayaa wadada ka baxay isagoo ka yimid Chicago kuna sii jeeday Seattle
Ugu yaraan afar baabuur ayaa la tibaaxay
Tareen rakaab ah oo Amtrak ah oo ka hawlgalayay inta u dhaxaysa Seattle iyo Chicago ayaa ka leexday galabnimadii Sabtida waqooyiga-dhexe ee Montana, sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah iyo warbaahinta bulshada.
Waxay ahayd cirka buluugga ah ee Montana markii 147 rakaab ah oo saarnaa tareenka Amtrak ay noqdeen dhibbanayaashii leexashada. Dhowr rakaab ah ayaa weli ku xaniban.
Tareenka ayaa u jiheystay dhanka galbeed kuna sii jeeday Seattle, isagoo ka leexday inta u dhexeysa Havre iyo Shelby oo ku yaal Montana.
Tareenka ayaa ka leexday meel 1 mayl u jirta Joplin, Montana, oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa 200 oo qof.
Qof goobjooge ah oo soo dhejiyay ugu yaraan afar baabuur ayaa la dul -taagay waddada. Jawaab -bixiyayaasha ugu horreeya ayaa goobta jooga.
Waqtigan xaadirka ah 3 dhimasho ayaa la soo sheegayaa iyo dhaawacyo badan.
Shilkii ugu dambeeyay ee tareenka Amtrak ee ugu dambeeyay waxaa la duubay Febraayo 4, 2018, Casey, South Caroline, markii tareen uu ku dhacay tareenka xamuulka CSX ee istaagay.
Khubarada nabadgelyada ayaa sidoo kale ku talinaya doorashada kursi gadaal u jeeda marka tareen la raacayo. Sababtoo ah qofka meesha fadhiya ayaa aad ugu yar inuu horay u soo tuuro marka ay isku dhacaan. Tareenadu waxay u badan tahay inay wax ku garaacaan dhinac-ka-hor marka loo eego xagga hore ama xagga dambe.